Niezaka nanasoaso ny fiaraha-miasa amin’ny Frantsay ny filoham-pirenena, ka na efa mahazo laka eto aza ny firenen-kafa toy ny sinoa dia nilaza ny tenany fa manana ny lanjany lehibe ny Frantsay amin’ny alalan’ireo orinasa matanjaka toy ny Bouygues, Colas sy Airport Paris, izay nahazo ny asa amin'ny fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato. Niaiky ny filoha Rajaonarimampianina fa sady mpiara-miasa voalohany amin’i Madagasikara ny Frantsay no eo foana amin’ny zava-drehetra. Misy ny fomba mahazatra amin’ny resaka fitadiavana mpamatsy vola toy ny AFD, fa zava-dehibe ihany koa ny fiantsoana ny mpampiasa vola tsy miankina Frantsay ho avy aty Madagasikara, izay misokatra ho an'ny rehetra, hoy izy. Mikasika ny zava-misy eto Madagasikara, dia notsipihin-dRajaonarimampianina fa ilaina ny mahafantatra ny dingana nizoran’ny firenena. Notsiahivin’i Hery Rajaonarimampianina ny kabariny tamin’ny 26 jona fa nisy 13 ny filoham-pirenena teto nandritra ny 57 taona, ary 6 ihany no voafidy. Ho valin'ny fiantraikan'ny krizy nifanesy teo amin'ny toekarena, indrindra ny sosialy, dia ilaina ny fanafainganana ny ezaka amin’ny fampandrosoana sy ny fananana fomba fijery mitsinjo ny ho avy. Mazava ho azy fa ambany ny tahan’ny fandrosoana, saingy tsy maintsy ekena satria tsy vita iray andro ny zava-drehetra, hoy Rajaonarimampianina, izay toa miala bala amin’ny tsy fahombiazany. Momba ny fambolena, dia mbola tranainy ny fomba famokarana, ka mila mivoaka amin’ny fomba nentim-paharazana ary miroso amin’ny fanodinana. Nilaza i Hery Rajaonarimampianina fa 4% ny tahan’ny fitomboan’ny harin-karena ary tanjona ny hampiakarana azy ho 6%. Momba ny resaka kolikoly, dia tsy maintsy miady manohitra ny kolikoly amin'ny ambaratonga rehetra, nefa koa hanana ny fomba fanabeazana. Ny lehibe indrindra, dia tsy maintsy hatrehana ny fampandrosoana, ny ady amin'ny fahantrana, ny fanampiana ny vahoaka. Resaka ambony latabatra aloha no betsaka hatreto.Mbola nivahiny tao amin’ny TV5 Monde ihany koa moa ny filoha Malagasy halina.